Indlu enkulu ephezulu yedolophu yokusebenza okanye ukudlala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKeith
UFrangipani yenye yeesuti ezimbini zaseMaraval Rd. Izindlu, ezibekwe kuMbindi ePort of Spain yenzelwe ngokukodwa iirenti zexeshana elifutshane, umoya ogcweleyo ogcweleyo unamagumbi amabini okulala e-en Suite kunye nekhitshi yesicwangciso esivulekileyo, indawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla.
Ifakwe umoya ngokupheleleyo kwigumbi lokulala eline-en Suite elinekhitshi evulekileyo, indawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla kwindawo ekumbindi wePort of Spain. I-Frangipani inokuqeshwa njengeyunithi yokulala enye (igumbi lokulala elingaphambili/igumbi lokuhlambela elivaliweyo livaliwe) ngexabiso elifanayo ne-Oleander xa loo yunithi ingekho.
I-Maraval Road, iNewtown yindawo ekhuselekileyo, edlamkileyo esembindini elungiselelwe ukufikelela kumbindi wedolophu, impuma kunye nentshona yePort of Spain kunye neendawo zokuhlala.
Ineendawo zokutyela ezininzi, imivalo kunye nobomi basebusuku kunye nokhetho lwezemidlalo kumgama ohamba lula, njengoko zinjalo uninzi lwezindlu zozakuzo, iindawo zomthambo ezimbini, iicawe kunye nezibonelelo zonyango. Nangona kwindawo kunye (ethintelweyo) indawo yokupaka ezitalatweni iyafumaneka imoto ayiyomfuneko njengoko isithuthi sikawonke-wonke sifumaneka lula.
Sinomphathi wepropathi oya kulungiselela ukufikelela kunye nokujongana nayo nayiphi na imiba enokuthi ivele. Kukwayenzeka ukuba uzijonge ngokwakho ngokusebenzisa ibhokisi yokutshixa enikiweyo. Sikwanaye nomncedisi okhethiweyo ukuba asifumaneki.
Sinomphathi wepropathi oya kulungiselela ukufikelela kunye nokujongana nayo nayiphi na imiba enokuthi ivele. Kukwayenzeka ukuba uzijonge ngokwakho ngokusebenzisa ibhokisi yokutshix…